थोक हामीसँग कारखाना र निर्मातालाई बताउन हामीसँग "सेक्रेट टु ग्रेट स्वाद" छ मुस्कान
हामीसँग तपाइँसँग कुरा गर्न एउटा "सेक्रेट टु ग्रेट स्वाद" छ
२०१ 2018 मा फिर्ता डेटि FE गर्दै जबकि फेलम टेक्नोलोजी ब्रान्डको मूल स्थापना गरिएको थियो, "नेक्स्ट पोडको लागि" ब्रान्ड नाराको रूपमा प्रस्ताव गरिएको थियो। प्रीमियम गुणस्तर र अनुभव प्रदान गर्दै, फेलम टेक्नोलोजीद्वारा संचालित अर्को पोड विश्वव्यापी अरबौं प्रयोगकर्ताहरूका लागि उत्तम विकल्पहरू थियो।
तबदेखि, हामीले शीर्ष आर एण्ड डी इञ्जिनियरहरू भर्ती गरेका छौं र आधारभूत विज्ञान प्रयोग गरेका छौं जस्तै सामग्री, हाइड्रोमेकानिक्स, एरोडायनामिक्स र थर्मोडायनामिक्स विश्व अग्रणी एटोमाइजेशन टेक्नोलोजी प्लेटफर्म निर्माण गर्न।
आजकल, तपाईं फेडरम सिरेमिक कोइलको साथ विश्वभरि बन्द पोडहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो साझेदारहरु चीन र अमेरिका बजार मा क्रमशः 70% र 30% बजार शेयर होल्ड। तर हामी कहिले पनि उपभोक्ताहरूको माग अन्वेषण गर्न रोक्दैनौं। तिनीहरू के चाहन्छन्? तिनीहरूको ध्यान के हो? के हामी टेक्नोलोजीमा प्रगति गरेर तिनीहरूको माग पूरा गर्न सक्षम छौं?
भाग १ हामीले के पायौं?
२०२० को सुरूमा, फेलमले विश्वव्यापी सर्वेक्षण सुरू गर्‍यो र हजारौं उत्तर पानाहरू स collected्कलन गर्‍यो। यस बीच हामीले धेरै पेशेवर अनुसन्धान रिपोर्टहरू र विचारहरूको अध्ययन गर्‍यौं।
र हामी एक निष्कर्षमा पुगेका छौं कि उपभोक्ताहरूको अन्तिम बाफिंग खोजी स्वाद हो।
जब देखि फेइलम टेक्नोलोजीले भरिएका बन्द पोडहरू २०१ 2018 को सुरूमा सुरू गरिएको थियो, हामीले लगातार हजारौं अन्त प्रयोगकर्ताहरूबाट प्रतिक्रिया संकलन गरेका थियौं। बहुआयामी विश्लेषण र तुलनाको आधारमा, हामी फेला पार्छन कि तिनीहरू फेमि ce सिरामिक कुण्डलले अन्य तताउने प्रविधि उत्पादनहरूमा पोडहरू मनपराउँदछन्, विशेष गरी स्वाद सम्बन्धी आयामहरूमा जस्तै स्मूदीपन, चुहावट, निकोटिन वितरण दक्षता र स्थिरता।
भाग २ उनीहरूले के भने?
हजारौं उपभोक्ताहरूको प्रतिक्रियाले संकेत गर्दछ कि एफईएलएम भित्र रहेको उत्पादनहरूको सब भन्दा ठूलो फाइदा भनेको ठूलो चाख्नु हो। जबकि महान स्वादको लुकेको गोप्य फेमेल सिरेमिक कोयलमा रहेको छ।
भाग Great महान स्वाद गर्न गुप्त
हीटिंग टेक्नोलोजीले हाम्रो जीवन अझ राम्रो बनाउँछ र फीलमले वाफिंग स्वाद राम्रो गर्दछ।
आज, फेलमले हीटिंग टेक्नोलोजीलाई पुन: परिभाषित गर्दछ, अत्याधुनिक प्रविधिको साथ एकीकृत हुन्छ र सरलताको भावना जगाउँदछ। पहिलो कुण्डलीदेखि अर्बौं सम्म, फेलम उच्च गुणवत्तासँग अनुरूप छ, सम्पूर्ण विश्वलाई अपवाद बनाउने वाफिंग अनुभव प्रदान गर्दै।
फेलम सिरेमिक कोइल, महान स्वादको लागि गोप्य।
हामी कहिले पनि लुकेको रहस्य अन्वेषण गर्न रोक्दैनौं।
वैकल्पिक धूम्रपान, ई तरल भाप सिगरेट, न्यूपोर्ट ई सिगरेट, तातो सिगरेट, ई सिगरेट ब्लिस्टर प्याक, Epen,